ख्वै हाम्रो राजनेता ?
ब्यक्तिगत आनीबानी र स्वभावलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने महात्मा गान्धीका पनि थुप्रै नकारात्मक पक्षहरु थिए होला । मानिस भएपछि ब्यवहारतः ऊ पूर्णरुपेण भगवान कसरी बन्न सक्छ ? त्यसकारण महात्मा गान्धीलाई भगवान भनिएन/मानिएन । तर उनी निष्ठाको राजनीति गर्थे । र, सधैं परिवर्तन र स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरे । परिणाम आज उनी भारतका मात्र हैन विश्वका नेता बन्न पुगे । उनी जिवीत छैनन् तर विश्व राजनीतिका हजारौं जिवीत नेताहरु भन्दा बढी सम्मानपूर्वक स्थान छ उनको । एशियादेखि युरोपसम्म, अमेरिकादेखि अफ्रिकी मुलुकका चप्काचप्कामा उनलाई सम्मानपूर्वक सम्झिन्छन् मान्छेहरु । उनको नाम सम्झिदाँ श्रद्धाले शिरनत गर्छन मानिसहरू । किनकी उनी नेता थिएनन्, राजनेता थिए ।
राजनेताका नामहरु लिदै गर्दा विश्वसमुदायले उत्तिकै सम्मानपूर्वक सम्झिने नामहरु थुप्रै छन् जस्तो मार्टिन लुथर किङ, माओत्सेतुङ, नेल्सन मण्डेला, डा. मोहम्मद महाथिर, ह्युगो चाभेज, विस्टन चर्चिल आदिआदि । यी विश्वप्रसिद्ध राजनेताहरु एकै झिमिक वा सनकमा राजनेता भएका थिएनन् । यिनीहरुले स्वयंलाई राजनेता भनेर घोषणा गरेका पनि थिएनन् । तर आफ्नो भूगोलमा राजनीतिको एउटा साँघुरो सिमाभित्रबाट उठेर जनताप्रतिको उतरदायी राजनैतिक भूमिका निर्वाहका गरेका कारण आज उनीहरु विश्वसमुदायका माझ सम्मानित ब्यक्तित्व भएर परिचित छन् । र, अनन्त भविष्यसम्म भावी पुस्ताले पनि यिनका इतिहास पढ्दा गौरवभान्वित हुनेछन् ।
तर बिडम्बना हामी नेपालीले गतिलो गरि सम्झन लायकका कोही नेता पाएका छैनौ । केहि थिए जसले केहि गर्न पाएनन् । जसको शासन जनताले भोग गर्न पाएनन् । केहि थिए जसले शासन त गरे तर विभिन्न पारिस्थीतिक परिबन्धको घेरालाई तोड्न खोज्दै गर्दा आफैले घुँडा टेके । अहिले पनि लाखौं नेपालीहरु उनीहरुलाई बरोबर सम्झिन्छन् । सायद ती बाँचिदिएका भए वा तिनले शासन गर्न पाएका भए नेपाल अहिले कस्तो हुँदो हो भन्ने रुमानी कल्पनामा हराउने गर्दछन् । परन्तु ती सबै कृत्यहरु फगत छन् ।
अहिले देश संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ, नेताहरुको कानमा बतास लागेको छैन । कहिले सुदुर पश्चिम जल्छ, कहिले तराई ठप्प हुन्छ । कहिले तामाङ सडकमा ओर्लन्छन् त कहिले बाहुनक्षेत्रीहरु देश बन्दको दौडाहामा सडकमै ओर्लिन्छन् । हुँदाहुँदा बर्षौदेखि थिचोमिचोमा पारिएका वा बाहुनक्षेत्रीको शासनबाट शासित भएका भनिएकाहरु सडकभरी नारा घन्काउन पुग्छन् – तातो रगत चाटिन्छ, बाहुनक्षेत्री काटिन्छ ! अब जातियताको मुद्धा बलियो बनेर स्थापित हुँदैछ, राष्ट्रियताको मुद्धा हराउन थालिसक्यो । केहि नेता भनिएकाहरु उक्साउँदै छन् जातजातीहरुलाई – जाऊ मुठभेड गर ! अधिकार खोसेर लिऊ ! तर कोसँग ? कसैलाई केहि पत्तो छैन ! देशमा दण्डहिनता मौलाउँदै गएको छ । सबै क्षेत्र अस्तब्यस्त छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त तोकिएकै समयमा संविधान जारी हुनेमा ठूलो आशंका छ । नेताहरु जुँगाको लडाईमा केन्द्रित छन् । देशको ‘आज’ बर्बाद हुँदैछ, उनीहरु आफ्नो भोलीको राजनैतिक भविष्य सम्झेर काम गर्न चाहन्छन् । धुर्तहरु ! आफूआफूबिच मैं तय गर्न सकिने कुरामा विदेशी राजदुतहरुको मध्यस्थता खोज्दैछन् । सायद यसकारण पनि नेपालीहरु विवशतापूर्वक ती नेताहरुलाई बिर्सन सकिरहेका छैनन् जसको उनीहरुले शासन भोग्न पाएनन् । अर्कोतर्फ वर्तमान समयमै भएका नेताहरुप्रति नेपालीहरुको एक रत्ति विश्वास रहेन । जसका कारण देश र जनताका लागि ‘केहि गर्छु’ भन्ने ठानेका नेताहरु पनि जनताका नजरमा ओझेल पर्न थालिसकेका छन् । देश संकटग्रस्त बन्दैछ । साँच्चिकै देशलाई एउट राजनेता चाहिएको छ ।
अहिले उपलब्ध नेताहरुलाई हामीहरु विश्वास गर्दैनौं । एकातिर यो तीतो सत्य छदैंछ । तथापि नेता भन्ने ब्यक्तित्व अमूर्त हुँदैन । त्यो आकाशबाट झर्ने बस्तु होइन । बरु अहिले उपलब्ध नेताहरु बीचबाट एउटा असल नेतृत्व प्रकाशमा आउन मात्र नसकेको हो । देश कठिन परिस्थितीबाट गुज्रिरहेका बेला एउटा दूरदर्शी नेतृत्व अगाडि नदेखिएको मात्र हो । तर हामी के विश्वास गर्न सक्छौं भने हामीसँग उपलब्ध खराब नेताहरुको भीडबाट एउटा असल नेतृत्व हाम्रा लागि यो संगीन परिस्थितीको सामना गर्नका खातिर अग्रपंक्तिमा आउनेछ । र, समयमै हामीले उसलाई चिन्ने मौका पाउनेछौं । र, कालान्तर सम्म त्यो हाम्रा लागि स्मरणीय र सम्माननीय ब्यक्तित्व बन्नेछ ।